Spectrocoin.com dia mikendry ny hanome rehetra-in-iray bitcoin tolotra ho an'ny mpampiasa. Afa-tsy ny bitcoin kitapom-batsy, izy ireo manome tolotra fifanakalozana, ny bitcoin debit karatra, ary ny vahaolana ho an'ny mpivarotra nanaiky bitcoin ao amin'ny asa aman-draharaha isan 'andro. Spectrocoin teknolojia azo antoka mitambatra amin'ny infrastructural comprehensiveness mba hamoronana avo-toetra bitcoin fanompoana noho ny mpanjifa.
Spectrocoin manome aloha-to-miverina asa ho an'ny olona izay te hampiasa bitcoin manerana izao tontolo izao. Manana bitcoin e-kitapom-batsy azo mivantana vatsian'ny ny BitCoins nividy teo ny fifanakalozana. Ny karatra debit bitcoin manao fandaniana BitCoins ho mora tahaka ny Fiat vola. Ny orinasa ihany koa dia manome vahaolana ho an'ny mpivarotra mba hahafahany manaiky bitcoin noho ny asa aman-draharaha. Mba hahatonga ny fampidirana ho mora araka izay azo atao ho an'ny olon-drehetra afa-tsy ny API, Spectrocoin manome eCommerce Plugins sy Tranomboky ho an'ny mpivarotra sy ny kitapom-batsy.
Bitcoin debit karatra dia vatsian'ny avy hatrany amin'ny bitcoin, ka tsy ilaina ny hanakalo ny cryptocurrency mialoha ny fandoavam-bola. Ny VISA sy ny karatra plastika azo ampiasaina na oviana na ATM manerana izao tontolo izao, denominated tena ratsy ny vola dia USD, EUR sy GBP. Na ny plastika sy ny virtoaly karatra dia nanaiky am-mihoatra noho ny 20 tapitrisa toerana sy ny fivarotana an-tserasera manerana ny aterineto. Izy ireo ihany koa manome safidy ho an'ny tompona fandraharahana ny mifamadika ny bitcoin vola ho an'ny asa. Spectrocoin orinasa manolotra karatra ho toy ny vahaolana ho an'ireo izay dingana iray mialoha eo amin'ny tontolon'ny niomerika.
Spectrocoin karatra - Tsy toy ny maro hafa bitcoin debit karatra - dia nalefa sambo tany akory va izao tontolo izao, anisan'izany ny India sy Shina koa ary azo US olom-pirenena ihany koa. Normal fandefasana entana raha ny karatra maimaim-poana sy tonga ao 3-4 herinandro. Raha misy te-hanafainganana ny fandefasana, ho fanampiny sarany ny $ 75 / ?? 69 / £ 50 ny expedited fandefasana safidy tsy ampy. Amin'ity tranga ity ny karatra dia mety ho ny mpampiasa ?? S tànany tamin'Andriamanitra 4-5 andro.
Spectrocoin namorona fampiharana finday avo lenta ho an'ireo izay mila hahatratra ny ara-bola an-dalana. Ary iza no mila izany ?? T? Ny Spectrocoin kitapom-batsy dia hita ety ivelany ao amin'ny Google Play, App Store, ary koa ao amin'ny Windows Store.
Mampiasa ny fanompoana antony roa alàlana ho an'ny fidirana. Ny fanamarinana dia tsy antsipirihany dingana tsara eo amin'ny tranonkala. Mba hanamarinana ny mpampiasa ny tenany, izy ireo dia tsy maintsy manome ny pasipaoro manan-kery na ID utility karatra sy ny volavolan-dalàna. Ny politika AML manome tsipiriany momba ny antontan-taratasy, fa tsy misy vaovao mikasika ny dingana tena maka mihitsy raha mandeha tsara ny zava-drehetra.
Voamarina mpampiasa dia afaka nampiditra ny Spectrocoin karatra tamin'ny indrindra 10000 USD indray mandeha. Spectrocoin mamela Max 2 ATM fifanakalozana isan'andro, amin'ny tontalin'ny 2000 USD. Tsy misy fetrany ny fampiasana pos sy ny mpampiasa voamarina Spectrocoin manolotra tolotra pos entana koa. Raha ny Spectrocoin karatra dia voamarina, dia afaka mandray vola avy amin'ny antoko fahatelo toy ny mpivarotra sy ny filokana PayPal toerana. Raha misy vola dia azo avy amin'ny iray voamarina karatra, ireo vola dia voasakana mandra-karatra dia ho voamarina.
Mety ihany koa ny mpampiasa tsy voamarina mampiasa Spectrocoin tolotra, na izany aza izy ireo dia nampiseho ny sasany fetra. Ny ambony indrindra-up vola ihany 2500 USD. ATM amin'ny mpampiasa voamarina ihany afaka hiala 200 USD amin'ny fotoana iray, 400 USD isan'andro from indrindra 2 varotra. Total ATM fanesorana fetra ho an'ny mpampiasa voamarina dia 1000 USD. Etsy ankilany, na dia tsy voamarina ireo mpampiasa aterineto dia afaka miantsena, na vola ao amin'ny tsy manam-petra ny terminal pos vola avy amin'ny bitcoin debit karatra. Pos entana fanompoana dia tsy azo mpampiasa voamarina.
Ny UK miorina Spectrocoin efa nanomboka tamin'ny 2013. Ny orinasa manana ny foibe in Landsdowne Row, London. Nanomboka ny debit bitcoin hamoaka karatra in May, 2015.
Na dia tsy lisitra Spectrocoin ny tompony mivantana ao amin'ny tranonkala, araka ny Pitchbook sy Linkedin ny bitcoin mpanome tolotra no tompony olona telo avy any Litoania.
Vytautas Karalevičius alohan'ny famatsiam-bola Spectrocoin, Nanana anjara asa isan-karazany toy ny mpandalina ara-bola ao amin'ny orinasa. Ny tompon-javatra fahatelo Mantas Mockevicius maro izay manana diplaoma amin'ny fianarana raharaham-barotra iraisam-pirenena. Justas Dobiliauskas no lehiben'ny mpiandraikitra ny teknolojia ao amin'ny startup noho ny 6+ taona traikefa s amin'ny orinasa iray developer rindrambaiko planina orinasa.
Spectrocoin karatra plastika bitcoin vola lany $ 9.00 / ?? 8.00 / £ 6.00, raha ny virtoaly karatra ihany $ 0.50 / ?? 0.50 / £ 0.50. Misy ihany koa ny anjara-raharaha fanompoana isam-bolana ny saran'ny 1 USD ho an'ny karatra plastika sy ny virtoaly. Na izany aza izany dia tsy nandrara sarany raha ny fifandanjana ny tantara dia aotra. koa, tsy misy inona na inona saran'ny, ireo mpampiasa izany dia afaka miezaka ny karatra somary mora sy mora vidy.
Loading vola lany ny karatra dia afaka raha toa ny vola avy avy amin'ny Spectrocoin kaonty. Raha tsy izany ny vola lany Loading dia miankina amin'ny fomba ampiasaina: famindrana avy amin'ny banky dia maimaim-poana, fa amin'ny alalan'ny carte de crédit dia hasaina ho amin'ny 5%. Raha ny karatra dia namaha ny entana amin'ny bitcoin kitapom-batsy, izany vidiny 0.5% kely indrindra amin'ny anjara-raharaha ny $ 1.00 / ?? 1.00 / £ 1.00 isaky ny fividianana bitcoin varotra. Dia famindrana maro amin'ny vola kely mety lafo be dia be amin'ny farany ny mpampiasa.
Rehefa mampiasa ATM, Spectrocoin fiampangana 2.5 USD ny fanesorana an-trano sy ny vola 3.5 USD ny vola hafa fanesorana. Misy ihany koa ny 3% fanakalozam-bola sarany izay voampanga raha ny fandoavam-bola atao afa-tsy ny toerana misy anao vola. Rehefa mandray vola amin'ny karatra, pos entana ny saran'ny dia 1.99%.
Spectrocoin manome misy bitcoin fifanakalozana eo ho eo ny vidin'ny amin'ny toerana. Ny vidin'ny bitcoin omena amin'ny 26 vola, anisan'izany ny volamena sy vola an altcoins toy ny tsipika koa. Ny Spectrocoin bitcoin vidiny dia ao anatin'ny azo ekena dia asao-tolotra isan-karazany ny salam-vidin'ny bitcoin eny an-tsena.
Price $9.00/8.00 € / £ 6.00 $0.50/0.50 € / £ 0.50
Delivery 3-4 herinandro Instant
Anjara-raharaha fanompoana isam-bolana saran'ny ** $1.00/1.00 € / £ 1.00 $1.00/1.00 € / £ 1.00
inona na inona saran'ny FREE / FREE / FREE FREE / FREE / FREE
Card ambony niakatra avy tany SpectroCoin kaonty 0% 0%
Card ho Bitcoin kitapom-batsy (mividy bitcoin) 0.5% + $1.00/1.00 € / £ 1.00 0.5% + $1.00/1.00 € / £ 1.00
ATM fanafoanana in vola an-trano $2.5/2.25 € / £ 1,75 –
ATM fanesorana amin'ny vola $3.50/2,75 € / £ 2.25 –
3RD antoko entana 1.99% 1.99%
Fanakalozam-bola *** 3% 3%
Normal fandefasana (hatramin'ny 3-4 herinandro) Free –
Expedited fandefasana (4-5 andro) $75/€ 69 / £ 50 –
Ny sehatra ny Spectrocoin manana manga sy mavo misy pentina amin'ny fomba famolavolana. Mba hanamaivanana ny famakiana ny vato fisaka toy ny Pricing fandaharam-potoana, ny fefy ireo laharana dia asiana antitranterina amin'ny fanasongadinana. Small zavatra, fa manampy be dia be raha misy mitady mpampiasa namihina ny latabatra amin'ny andalana maro.
Tamin'ny fizarana Price bitcoin, misy tabilao mampiseho ny vidin'ny bitcoin ho nomena timeframe. Ireo mpampiasa dia afaka mora foana vidiny mamaky ny tantara avy ao amin'ny tabilao mivantana na inona na inona ny 26 vola.
Spectrocoin tranonkala na dia manome be dia be ny fanazavana momba ny tolotra, mbola tsy ahitana ny zava-drehetra mora raisina fa mety ho avy mpampiasa mety hila. Ny FAQ Tsy hanatitra fikarohana asa. Ny fanamarinana dia tsy antsipirihany fizotry. Ny tompon'ny orinasa dia tsy voasoratra ao amin'ny tranonkala. Ireo fanazavana ihany dia tsy zava-dehibe loatra toa, fa raha misy mpampiasa mitady zavatra sy tsy mahita, mety ho hahakivy. Fa na izany aza ny toe-javatra ireo Hot-dalana, sy ny Support dia tokony ho afaka ampy.
Hevitra mahaliana iray manan-danja mba hanampy ny Google fikarohana vokatry ny Spectroin. Toa mpampiasa sasany dia nanana olana ny orinasa ho toy ny bitcoin Forum manana foto-kevitra misokatra momba ny olona nitaraina momba Spectrocoin Fanidiana BitCoins fa tsy mamaly ny fanontaniana. Spectrocoin ny hatramin'izao tsy niaro ny tenany ny amin'izany zavatra izany. Izany no tsara fantatra fa amin'ny bitcoin fifanakalozana kaonty ny BitCoins dia tsy azo antoka, Noho izany dia mampirisika ny rehetra mba hitahiry ny BitCoins soa aman-tsara.
Bitcoin voaloa vola mialoha Card Limits
Max isan'ny Top-dehibe isan'andro 2
Max Top-up vola isaky ny fividianana $10,000/€ 10.000 / 8.000 £
Max Top-up vola isan'andro $20,000/20.000 € / £ 16.000
Pos entana *** tsy misy fetra
Max androm-piainany entana tsy misy fetra
Max isan'ny ATM fifanakalozana isan'andro 5
Max single ATM fanesorana $1,000/1,000 € / £ 800
Max ATM fanesorana isan'andro $2,000/2.000 € / £ 1600
Total ATM fanesorana fetra tsy misy fetra
Max Pos vola isan'andro (fivarotana) tsy misy fetra
Max maro notaterina ny Bitcoin kitapom-batsy varotra isan'andro 2
Min notaterina ny Bitcoin kitapom-batsy $2/2 € / £ 2
Max notaterina ny Bitcoin kitapom-batsy $2,250/2.250 € / £ 2.000
Total androm-piainany notaterina avy amin'ny karatra tsy misy fetra
Spectrocoin sarotra manome tolotra ho an'ny mpampiasa bitcoin. Ny bitcoin debit karatra dia natao ho an'ny rehetra manerana izao tontolo izao mpampiasa izay lehibe indrindra mpanohana toy ny karatra debit bitcoin orinasa tsy manohana US olom-pirenena. Ny mpampiasa koa base Nitatra ho an'ny Windows mpampiasa finday izay tsy mety ny teo bitcoin debit karatra mpanome tolotra. Na dia ny asa fanompoana sy ny Pricing dia somary mendrika, dia lafo ny fandefasana sy ny fitarainana manerana ny aterineto mba hampitahorana furure mpampiasa avy amin'ny lampihazo.